IPhone hotspot manokana tsy mandeha? Ity ny vahaolana! - Hafa
maninona ny ipad no manakatona fampiharana hatrany
maninona no tsy azoko esorina amin'ny iPhone ny sariko
ny findaiko tsy misy serivisy
maninona ny video youtube no tsy milalao amin'ny iphone-ko
ny fomba hahazoana sary mihetsika amin'ny iphone
IPhone hotspot manokana tsy mandeha? Ity ny vahaolana!
Ny toerana ipetrahana manokana dia tsy mandeha amin'ny iPhone ary tsy azonao antoka ny antony. Ny toerana ipetrahana anao manokana dia ahafahanao mamadika ny iPhone ho fantsom-pifandraisana Wi-Fi azon'ny fitaovana hafa ampifandraisina. Ao amin'ity lahatsoratra ity, Hanazava ny antony tsy mandeha ny toerana ipetrahana manokana an'ny iPhone ary asehoko anao ny fomba fanamboarana ny olana .
Ahoana no hametrahako toerana fidirana manokana amin'ny iPhone-ko?
Zavatra roa no takiana mba hametrahana toerana ipetrahana manokana amin'ny iPhone-nao:
IPhone misy iOS 7 na taty aoriana.
Drafitra finday iray izay misy data ho an'ny toerana ifandraisana manokana amin'ny finday.
Raha mahafeno fepetra ny iPhone sy ny drafitra findainao dia zahao ny lahatsoratray hafa hianarana ny fomba fananganana teboka fidirana manokana . Raha efa nanamboatra toerana ipetrahana manokana ianao, saingy tsy mandeha amin'ny iPhone-nao, araho ny dingana etsy ambany hamahana ilay olana.
iphone 6 miampy olana amin'ny efijery
Ampandehano ary esory ny angona finday
Ny toerana ipetrahana manokana dia mampiasa angona finday hanodinana ny iPhone ho toerana mafana Wi-Fi. Rehefa mifandray amin'ny toerana ipetrahanao manokana sy miserasera amin'ny Internet ny fitaovana hafa dia mampiasa ny angona finday avy amin'ny drafitry ny findainao izy ireo. Indraindray ny famonoana ny angon-drakitra finday sy ny fiverenany dia afaka manamboatra glitch rindrambaiko madinidinika izay manakana ny toerana ipetrahana manokana tsy hiasa amin'ny iPhone-nao.
Zahao ny fanavaozana ny toe-javatra ataon'ny mpandraharaha
Mandefa tsindraindray ny mpanome tolotra tsy misy tariby sy Apple anao fanavaozana ny fametrahana ny mpitatitra hanatsarana ny fahafahan'ny iPhone mifandray amin'ny tambajotran'ny mpamatsy anao. Midira ao amin'ny Fikirana -> Ankapobeny -> Momba hijerena raha misy fanavaozana ny fametrahana ny mpitatitra vaovao. Raha izany dia hiseho eo amin'ny dimy ambin'ny folo segondra ny varavarankely pop-up. Raha tsy miseho ny fikandrana pop-up dia mety tsy misy ny fanavaozana ny fikirakirana ny mpitatitra.
Ny famerenana indray ny iPhone dia vahaolana iraisana amin'ny olana isan-karazany. Mihidy voajanahary ny programa rehetra ao amin'ny iPhone rehefa novonoinao izany, izay afaka manamboatra bug sy glitches madinidinika.
Mamono a iPhone 8 na kinova taloha, tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra mandra-pahatongan'ny swipe hamono eo amin'ny efijery. Alefaso ny kisary hery mena sy fotsy avy eo ankavia miankavanana mba hamonoana ny iPhone. Tsindrio ary tazomy indray ny bokotra herinaratra handrehitra ny iPhone-nao indray.
Mamono a iPhone X na kinova vaovao , tsindrio ary tazomy ny bokotra volume ary ny bokotra eo anilany miaraka mandra-pahatongan'ny swipe hamono eo amin'ny efijery. Kitiho ny sary famantarana ny hery mena sy fotsy avy eo ankavia miankavanana mba hamonoana ny iPhone. Mba hamerenana amin'ny laoniny ny iPhone dia tsindrio ary tazomy ny bokotra sisiny mandra-pisehoan'ny Apple logo.
Hanavao ny iOS iPhone anao
IPhones miaraka amin'ny iOS 7 na taty aoriana dia mahavita mampiasa toerana mafana, raha toa ka tafiditra ao anatin'ny drafitry ny findainao io. Ny kinova iOS efa lany daty dia mety miteraka olana isan-karazany amin'ny rindrambaiko, noho izany dia zava-dehibe ny hitazomana ny iPhone mandrak'androany.
Sokafy ny fikirana ary kitiho General -> Fanavaozana ny lozisialy hijerena raha misy fanavaozana iOS vaovao misy. mikasika Sintomy sy apetraka raha misy fanavaozana iOS misy. Zahao ny lahatsoratray hafa raha manana ianao olana manavao ny iPhone-nao !
Ny famerenana ny fikirakira tambajotra ao amin'ny iPhone dia mamafa ny toerana rehetra momba ny finday, Wi-Fi, Bluetooth, ary VPN ary hamerina azy ireo amin'ny hadisoan'ny orinasa. Ny famerenana ny fikirakirana ny angon-drakitra finday amin'ny alàlan'ny fanodinana orinasa dia mety hamaha olana rindrambaiko sarotra izay mety hanakana ny toeran'ny toerana ipetrahana manokana an'ny iPhone. Raha tokony hiezaka ny hahita izany olan'ny rindrambaiko sarotra izany izahay dia mamafa azy fotsiny amin'ny iPhone!
Raha hamerina ny fikirana tambajotra dia sokafy Fikirana ary mikasika Jeneraly -> Haverina . Avy eo paompy Avereno ny fikirana tambajotra. Hasaina hikasika ianao Avereno ny fametrahana ny tambajotra indray hanamafisana ny fanapaha-kevitrao. Hikatona ny iPhone anao, hiverina indray ary hiverina indray.
Apetraho amin'ny maody DFU ny iPhone-nao
Ny dingana farany azonao raisina hialana tanteraka amin'ny olan'ny rindrambaiko dia ny famerenana amin'ny laoniny ny DFU, ilay karazana famerenana amin'ny laoniny iPhone. Ny DFU dia mamerina mamafa sy mamerina ny tsipika kaody rehetra amin'ny iPhone. Alohan'ny hametrahana ny iPhone amin'ny DFU, dia tena mamporisika anao izahay mamorona backup ka tsy ho very ny data, rakitra na fampahalalana anao.
Zahao ny anay torolàlana tsikelikely mankany amin'ny famerenana amin'ny laoniny DFU rehefa vonona ny hametraka ny iPhone ao anaty maody DFU ianao!
Mifandraisa amin'ny mpanome tolotra tsy misy tariby anao
Raha mbola tsy mandeha ny toerana ipetrahana anao dia mety misy olana amin'ny drafitry ny findainao na ny fitaovanao iPhone. Manoro hevitra anao izahay hifandray amin'ny mpanome serivisy tsy misy tariby alohan'ny handehananao any amin'ny Apple Store. Raha mankany amin'ny Apple Store ianao aloha, dia mety hilaza aminao izy ireo mba hiresaka amin'ny mpitatitra anao.
Raha nanova ny drafitry ny findainao ianao tato ho ato, na raha mila havaozina izy ity, dia mety hiteraka tsy mandeha ny toerana ipetrahana manokana an'ny iPhone. Ireto ny laharan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ho an'ireo mpitatitra efatra voalohany any Etazonia:
fanamafisana ny vidin'ny fiara amerikana
Raha manana mpamatsy serivisy tsy misy tariby hafa ianao, google ny anaran'ny mpanome anao miampy ny teny hoe 'fanohanan'ny mpanjifa' hahitanao ny nomeraon-telefaona na tranokala tadiavinao.
Tsidiho ny Apple Store
Raha nifandray tamin'ny mpitatitra anao ianao ary tsy misy olana amin'ny drafitry ny findainao dia tonga ny fotoana hifandraisanao amin'i Apple. Azonao atao fifandraisana manohana avy amin'ny Apple amin'ny Internet, amin'ny alàlan'ny telefaona, na amin'ny fandaharam-potoana amin'ny fotoana voatondro ao amin'ny Apple Store akaiky indrindra. Antenna iray ao anatin'ny iPhone-nao mety ho simba, manakana anao tsy hampiasa angona finday hamoronana toerana ipetrahana manokana.
Miditra amin'ny Access Point
Miasa indray ny toerana ipetrahana anao manokana ary afaka manangana ny toerana misy anao Wi-Fi ianao. Fantatrao izao izay hatao amin'ny manaraka dia tsy hidina intsony ny toerana ipetrahanao manokana! Raha manana fanontaniana hafa ianao, dia avelao izy ireo ao amin'ny faritra misy hevitra etsy ambany.